Srasta Khabar:: काव्य मुशायरामा रम्घाली र अर्याल Srasta Khabar
आमाका सबै मखमली दुखहरु खिपेर
यसपाला आमाकै कविता लेखौँ भनेको
तर आमा भन्नुहुन्छ
पहिला देशको कविता लेख छोरा ।
शनिबार काव्य मुशायराको नवौँ शृङ्खलामा कविको भूमिकामा उभिनुभएका प्रकाश रम्घालीले समाज, समय र वर्तमान विसङ्तिहरुलाई इगिंत गर्दै सशक्त कविताहरु सुनाउनु भयो । उहाँले लाहुरे संगीत, रिटायर्ड जर्नेल, फूलमाया तलाई म साँच्चिकै माया गर्छु, रहर, नौलो शहर, आमा भन्नुहुन्छ, प्रेमकलि तिमीलाई म सोध्न चाहन्छु, देशमात्र किन चलाख हुँदैन बा ! समेत गरी आठ कविता सुनाउनु भएको थियो ।
सुनाउ तिम्रो छेउछाउको कति जान्छ ?
म त बगर हुँ मेरो नजिकैबाट नदि जान्छ ।
त्यस्तै गजलकार कृष्णप्रसाद अर्यालले आफ्ना गजलका उम्दा सेरहरुमार्फत् निकै सशक्त गजलहरु प्रस्तुत गर्नुभयो । विविध विषयवस्तुहरुलाई समेटेर लेखिएको एक दर्जन गजलको प्रस्तुतीका कारण अर्याललाई दर्शकहरुले निकै रुचाए । गजलकार र कविको स्तरीय प्रस्तुतीको प्रभावले मण्डला थिएटर कार्यक्रम अवधिभर गुञ्जयमान रह्यो ।
अनामनगरस्थित मण्डला थिएटरमा सम्पन्न कार्यक्रममा बोल्दै कार्यक्रम संयोजक गजलकार यात्रीप्रकाश पाण्डेले
कार्यक्रमले एक वर्ष पुरा गरेको अवसरमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो । काव्य मुशायराको लागि सर्जक छनौट गर्दा कुनै रगं, भुगोल, प्रदेश र क्षेत्र नछुट्याई, कुनै सीमानालाई नबाधी र सीमानामा नबाधिई अघि बढिरहेको र बढ्ने कुरा व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्रम सञ्चालक बरुण रिजालले कार्यक्रममा मिठो आवाजको चटनी थप्नु भएको थियो ।